ငါရွေးချယ်ခြင်း၏နောက်ဆုံး - ဆုရရှိသူ ၁၂ ယောက်။ • musanews
ပင်မစာမျက်နှာ အသိုင်းအဝိုင်းခံစားပါ ငါရွေးချယ်ခြင်း၏နောက်ဆုံး - ဆုရရှိသူ ၁၂ ယောက်။
Ilaria, La Mura
Naples အဆိုတော် - တေးရေးဆရာနှင့်ထုတ်လုပ်သူ Luciano Buonfiglio မှစီစဉ်သောဂီတဂီတပြိုင်ပွဲ Ho Scelto Te တွင်ပထမဆုံးပါ ၀ င်ခဲ့သောအနုပညာရှင်တစ်ရာငါးဆယ်ကျော်မှနည်းပညာဂျူရီလူကြီးများမှရွေးချယ်သောနောက်ဆုံးဆယ့် ၂၄ ယောက်သည်အီတလီတစ်နိုင်ငံလုံးမှရောက်ရှိလာသည်။
Luciano Bonfiglio, အနုပညာအတွက်နာဇီအဆိုတော် - တေးရေးဆရာ
အမှတ်ရစရာပြပွဲတစ်ခုဖြစ်သည့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ပေါင်းစည်းခြင်းပွဲသည်ဂီတဘာသာစကားများ၏မြို့တော်နေပယ်တွင်သာကုလားကာကိုဖြိုဖျက်နိုင်ခဲ့သည်။ ကန့်သတ်ချက်များ၊ အရှိန်အဟုန်အပြောင်းအလဲများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်မျက်နှာဖုံးများရှိလင့်ကစားယူရီယာအလယ်ဗဟိုတွင်ဗိုလ်လုပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့သည်။ အီတလီ၌ပင်ခေတ်မှီခရစ်ယာန်ဂီတနှင့်၎င်း၏ဝှက်ထားသောစွမ်းရည်များကိုတရားဝင်ဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်၍ မွေးဖွားလာသည့်ဖြစ်ရပ်တစ်ခု။ music ၀ ံဂေလိနှင့်နီးစပ်သောအနက်ရောင်အသံများ၊ လူမျိုးပေါင်းစုံနှင့်ပေါ့ပ်အသံများ၊ အဖြူရောင်အသံများ၊ စင်မြင့်ပေါ်တွင်အစားထိုးဖြည့်တင်းခြင်း၊ အီတလီဂီတမြင်ကွင်းတွင်အမှန်တကယ်အသစ်သောဘဝကိုပေးစွမ်းသည်။
"နောက်ဆုံးတော့ငါတို့ဒီမှာ!" လူကြိုက်များ cantate ကရှင်းပြသည် Mavi Gagliardi dei Sud58, အတူတကွထူးခြားသော guest ည့်သည် အန်တိုနီယိုမာရီနို Michelle Hunziker မှကောက်ယူခဲ့သော All Togher Now ၏နောက်ဆုံးထုတ်ဝေမှု၏အဓိကဇာတ်ကောင်မှာ“ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်လာသည့်ဤအမျိုးအစားပင်ထိုက်သင့်သည့်နေရာရရှိရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ဒါဟာအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး၊
“ ကျွန်တော်တို့ဘာမှတီထွင်တာမရှိသေးပါဘူး” ဟုတင်ဆက်သူကပြန်ပြောပြသည် Mauro Ferraris «ပါရမီစွမ်းရည်ဖော်မြူလာကိုလူတိုင်းသိကြပါတယ်။ ယူအက်စ်အေနှင့်လက်တင်အမေရိကရှိဤအဆိုတော်များသည်ပြဇာတ်ရုံများသို့တက်ကြပြီးအားကစားရုံများကိုဖြည့ ်၍ စံချိန်တင်သန်းပေါင်းများစွာရောင်းချကြသည်။ အီတလီ၌လည်းအသိအမှတ်ပြုခံရရန်ရုန်းကန်နေရသည်။
Mauro Ferraris၊ တင်ပြသူ
ဒါကြောင့်သူတို့ကသူတို့ဆုရရှိခဲ့သည် ဒေးဗစ်ဖင်မာ၊ ဒေးဗစ်ဗန်ဒီဂလီယာ၊ နယူး၊ အာနတ်စတီးစီလီယို၊ ဒေးဗစ် Campilongo၊ ဟောရပ်၊ လော်ရာတက်စုန်း၊ Marianna Fasano, Antonella Cristofaro, ကာမဲန်ဖူဆန်နို၊။ ဆုပေးပွဲ၌ဆုရရှိသူ (၁၂) ဦး ကိုရွေးချယ်ခြင်းမပြုရသေးသော single singles များဖန်တီးရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ပြိုင်ပွဲ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာငယ်ရွယ်သောအရည်အချင်းများကိုအနုပညာဆန်ဆန်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးရန်၊ ဘားကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ "ဂီတ" ၏အရည်အသွေးကိုပေးရန်ဖြစ်သည်။
Bergamo မှတဆယ်ငါးနှစ်အရွယ်ရန် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ အဲဒီအစားတီဗီတင်ဆက်သူကချီးမြှင့်တဲ့ဝေဖန်သူများရဲ့ဆုကိုရရှိခဲ့သည် Ilaria, La Mura.
ရက်ချိန်းကိုဇွန်လတွင်အမျိုးသားရုပ်သံလွှင့်သူမှထုတ်လွှင့်မည် အီတလီ Channel ကို 161တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ထုတ်လုပ်မှုသည်လာမည့်ပြိုင်ဘက်များကိုလိုက်လံရှာဖွေနေခြင်းဖြစ်သည်။
"နောက်ထုတ်ဝေမလား" စီစဉ်သူမျှော်လင့်ထား Luciano Buonfiglio “ ဥရောပမှာကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရှိနေလိမ့်မယ်၊ ဒီရောဂါကူးစက်ခံနေရချိန်မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဒီပထမဆုံးစမ်းသပ်မှုထက်အများကြီးပိုကြီးတယ်။
တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် hosceltotemusic.it »တွင်ကြည့်ရှုပါ။
Daniela Iavolato ဖြစ်သည်
Facebook က hosceltotetalent
ယခင်ဆောင်းပါးxanthan ဆိုတာဘာလဲ။ gluten-free pasta နှင့်အချိုပွဲ (နှင့်ချက်ပြုတ်နည်းများတွင်မည်သို့အစားထိုးမည်) ကိုပြင်ဆင်ရန်လျှို့ဝှက်ပါဝင်ပစ္စည်း။
နောက်ဆောင်းပါးဗာဒံသီးသည်သင်မျှော်မှန်းထားသည်ထက် ပို၍ ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေသည် - ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာသည်၎င်း၏ကယ်လိုရီ ၂၀% လျော့နည်းစေသည်
ဒေါက်တာ Ilaria La Mura ။ ကျွန်ုပ်သည်နည်းပြခြင်းနှင့်အကြံပေးခြင်းဆိုင်ရာအထူးပြုစိတ်ပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသမီးများကိုသူတို့၏တန်ဖိုးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း မှစတင်၍ သူတို့၏ဘ ၀ ၌မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုကိုပြန်လည်ရရှိအောင်ကူညီသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသမီးများနားထောင်ခြင်းစင်တာနှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာပူးပေါင်းခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးစီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရှင်များနှင့်အလွတ်တန်းများအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုတိုးမြှင့်ပေးသော Rete al Donne ၏အသင်းအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ လူငယ်အာမခံအတွက်ဆက်သွယ်ရေးကိုသင်ကြားခဲ့ပြီး RtnTv ရုပ်သံလိုင်း ၆၀၇ တွင်စိတ်ပညာနှင့်သုခချမ်းသာကိုတီဗွီအစီအစဉ်တစ်ခုဖြင့်“ အတူတကွဆွေးနွေးကြပါစို့” ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ " ဘဝကိုပျော်မွေ့နေစဉ်အတွင်းလက်ရှိနေထိုင်ရာ၌အနားယူရန်နှင့်နေထိုင်ရန်သင်ယူရန် autogenic သင်တန်းကိုကျွန်ုပ်သင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးသား၌ရေးထားသောအထူးစီမံကိန်းဖြင့်မွေးဖွားလာသည်ကိုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အလုပ်သည်သင့်အား၎င်းကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးဖြစ်ပျက်စေရန်ကူညီရန်ဖြစ်သည်။
ကောင်းပြီအင်္ဂလိပ်စာကိုဘယ်လိုလေ့လာမလဲ အနည်းငယ်လှည့်ကွက်, သိကောင်းစရာများ & အကြံပြုချက်
Paolino Rossi ဆိုတဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်
Desirè Matani သည်အဆိုတော် Musa Talent ကိုမိတ်ဆက်ပါ
ဇန်နဝါရီလ 26, 2018
5 အလှအပ Hacking | မည်သူမဆိုအလှအပလှည့်ကွက်သိသင့်သည်
နိုဝင်ဘာ 23, 2017